Wararka - Sally England, waxay horseed u tahay farshaxanka casriga casriga ah ee 'Macrame'
Yaad iskaashi la leedahay
Xamuulkaaga ayaa halkan ku dhashay!
Xayawaanka dhogorta dareemay
Qurxinta Dareemka Guriga
Qurxinta Dharka Dharka Dareemay
Qurxinta Kale ee Xilliga Xilliga Dabiiciga ah
Xmas Felt Wool Qurxinta
Sally England, waxay horseed u tahay farshaxanka casriga casriga ee Macrame
Sally England waa fanaanad Mareykan ah oo farshaxan fiber ah kuna nool kana shaqeysa Ojai, California. Markii ay ku soo barbaartay Midwest, waxay ka qaadatay shahaadada bachelorka ee farshaxanka warbaahinta Grand Canyon State University ee Michigan ka dibna shahaadada Masterka ee Farshaxanka iyo naqshadaynta Machadka Farshaxanka ee Northwest Pacific ee Portland.
Intii ay dhiganeysay dugsiga qalin-jabinta sanadkii 2011, waxaa loo waxyooday inay si qoto dheer u gasho farshaxan jilicsan waxayna bilowday sahaminta qaab cusub oo macrame ah.
Iyada oo ay dhiirrigelisay hodantinimada qaab dhismeedka iyo kaamil ahaanta qaabka dabeecadda, waxay adeegsatay xarig suuf ah si ay u abuurto shaqooyin waaweyn oo loo yaqaan 'macrame' oo qaab casri ah loo adeegsado, taasoo u horseeday soo nooleynta Macrame sannadihii la soo dhaafay dad badanna ku dhiirrigelisay inay wax bartaan ama soo cesho farsamada tolnimada.
"Waxaan xiranaa dhar, waxaan seexannaa busteyaal, nolol maalmeedkeenana waxaa ku hareeraysan dharkan oo ka sameysan fibre. Farshaxankeyga farshaxanka ah ayaa sidoo kale leh dareen jilicsan sida dharka, oo bixiya dareen raaxo iyo deganaan ah. ka shaqee qol, saameyntu waxay noqon kartaa mid weyn, waxay siineysaa booska jawi gaar ah oo diirran, ”ayay tiri Sally England.
Ku rakibideeda fiilooyinka iyo darbiyada la sudho ayaa lagu soo bandhigay carwooyinka Maraykanka iyo dibeddaba, waxaana lagu daabacay qoraallo elektiroonig ah iyo kuwa daabacan. Sannadkii 2016, waxay ku qabatay bandhigeedii ugu horreeyay ee keli ah, "Agaasime Cusub," oo lagu qabtay Matxafka Grand Rapids Museum of Fine Arts.
Haddii aad xiiseyneysay alaabooyinka kor ku xusan, fadlan nala soo xiriir.
Waqtiga boostada: Dec-02-2020
Cinwaanka: No.38, Kaiyuan Road, Degmada Warshadaha Chengnan, Longyou, Zhejiang, Shiinaha
Qurxinta Guriga, Darbiga Farshaxanka, Qurxinta Kirismaska, Qurxinta, Qurxinta, Qurxinta gidaarka,